Jaaliyada Soomaaliyeed ee San Diego, California oo Sameysay mudaharaadkii labaad ee ay kaga soo horjeedaan qabsashada Itoobiya ee dalka Soomaaliya.
Maarso 9, 2007 San Diego (California): Jaaliyada magaalada
San Diego ee gobolka California ayaa maalintii Jimcaha ahayd ee bisha Maarso 9 keedii 2007 sameysay mudaharaad ay kaga soo horjeedaan qabshada Itoobiya ay qabsatay dhulka Soomaaliyeed. Mudaharaadkaas oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimey waxaa ka soo qeyb galay dadweyne ay tiradoodu kor u dhaaftay ilaa iyo laba boqol oo qof. Dadweynahaasu waxay isu jireen haween, carruur, odeyaal , dhallinyaro iyo wax garadba. Dadkii mudaharaadka sameynayey waxay socod dheer ku mareen badhtamaha magaalada San Diego, waxayna ishor taageen xafiiska maamulka dawlada ee magaalada San Diego.
Dadweynihii bannaan baxaas ka soo qeyb galay waxay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid ahaayeen dawlada Itoobiya ha ka baxdo dhulka Soomaaliyeed, si deg deg ahna ha u joojiso falalka waxashnimada ah ee ku sameynayaan dadweynaha aan waxba galabsan.
Magaalooyinka uu bannaanbaxan lagu qabtay waxaa ka mid ah dalka Maraykanka San Diego, Washington, Columbus, Seattle; dalka Kanada: Ottawa, Toronto, Windsor; Swizerland- Geneva, Sweden Stockholm, London-UK
Dadweynihii bannaan baxa dhigay waxay soo jeediyeen dhawrkan qoddob ee soo socda:
Inay ciidamada Itoobiyaanku shuruud la'aan si deg deg ah uga baxaan dhulka Soomaaliyeed.
Inay bulshada caalamka ah ee nabadda iyo dimoqiraadiyada jecelba dhallecayn dusha kaga tuuraan falalka xun xun ee ay ciidamada Itoobiyaanku dadka Soomaaliyeed u geysanayaan.
In arrimaha Soomaaliya si daacadnimo ah wada hadal iyo nabad lagu soo dabbaalo, ayna ka qeyb galaan dhinacyada ay khuseyso oo dhan.
Inay dawlada ku-meel-gaadhka ah ee Soomaaliyeed ka shaqeyso danaha dadkeeda iyo sidii ay isugu soo dhaweyd lahayd ummadda Soomaaliyeed. Shisheeyahana dalka looga saari lahaa.
Warbixintan iyo sawiradan waxaa idiin soo gudbisay:
Sahra Ugaas Maxamed Cabdi (Sahra Majeerteen)